စပယ်ပန်းဟာ မြန်မာ့ရိုးရာ ပန်းတွေများထဲမှ တစ်ပန်း အပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။ မွှေးပျံ့တဲ့ ရနံ့နဲ့ အဖြူရောင် ပုံသဏ္ဍန်ကတော့ စပယ်ပန်းကို လူတိုင်းကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ အကြောင်းပင် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဆယ်ကျော်သက်များ AIDS ရောဂါကြောင့် သေဆုံးသူ ၅ နှစ်အတွင်း သုံးဆဖြစ်လာ
နိုဝငျဘာ ၂၉, ၂၀၁၅ - ၉:၅၈ နံနကျ
ကုလသမဂ္ဂကလေးများ ရန်ပုံငွေအဖွဲ့သည် AIDS ရောဂါဖြင့် သေဆုံးကြသည့် ဆယ်ကျော်သက်အရေအတွက်မှာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း၌ ၁၅ နှစ်တာကာလအတွင်း သုံးဆခန့် များပြားလာသည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပြီး အများစုမှာ မွေးကင်းစအရွယ်ကတည်းမှ ကူးစက်ခံရသူများဟု ဆိုသည်။
အဇါဒါရီ ၏ အကျိုး စဝါးဗ် ကိုလျော့စေသည့် အချို့ လုပ်ရပ်များ
အောကျတိုဘာ ၃၁, ၂၀၁၅ - ၈:၅၈ ညနေ
အဇါဒါရီ ၏ အကျိုး စဝါးဗ် ကိုလျော့စေသည့် အချို့ လုပ်ရပ်များ ကိုပါကစ္စတန် နိုင်ငံ ကရာချီမြို့ ရှိ ကမ္ဘာ့တရားဝင် ရှီအာ အာလင်မ်များ လက်ခံအတည်ပြုထားသည့် ကျောင်း မဒဲရ်စာသိုလ်ကာအေမ် (အ.ဂျ) ဖက်မှ အခု လက်တလော ရက်ပိုင်း အတွင်း ထုတ်ဝေကြေငြာခဲ့ပါသည်။ မြန်မာစာတတ်ပရိသတ်များ အတွက် ဘာသာပြန် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ မိမိတို့နီးစပ်ရာ မိုအ်မေနီ မိုအ်မေနသ်များ ကို လက်ဆင့်ကမ်း ပေါက်သည်ချ ပေးကြပါရန် လေးစားစွာ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်။
“ကျုပ်ကို သင်္ကန်းချွတ်ပြီး ထောင်ထဲပို့ခဲ့တဲ့ အစိုးရ ခေါင်းဆောင်ကို အသေအလဲ မုန်းတယ်” ဆိုတဲ့ ဦးဝီရသူ/ အင်တာဗျူး
အောကျတိုဘာ ၃၀, ၂၀၁၅ - ၁၁:၀၄ ညနေ
မစိုးရိမ်တိုက်သစ်ဆရာတော် အရှင်ဝီရသူနှင့် မဇ္ဈိမတို့ မကြားသေးခင်က တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုအတွင်း လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲ အခြေအနေ၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အပေါ်အမြင်၊ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အပေါ်အမြင်၊ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအပေါ် အမြင်များကို မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့သည်။ မဇ္ဈိမနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုတွင် “ဒေါ်စုကို ချစ်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေ ကျုပ်လောက် ချစ်နိုင်မလား” ဟု တန်ပြန် မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။
ပြောကြည့်ပါ...... အချက်(၈) ချက်လောက်မေးကြည့်ချင်လို့ ဒီဆြာတော်ကြီးက ???
ပြောကြည့်ပါ...... အချက်(၈) ချက်လောက်မေးကြည့်ချင်လို့ ဒီဆြာတော်ကြီးက ??? ဆိုတာလေးကိုလေ့လာကြည့်ရအောင် ...ဗျား ...
ဆရာတော်တပါး အသတ်ခံရမှု ကရင် လက်နက်ကိုင်များ အထူးခုံရုံးဖွဲ့ စစ်ဆေး ပြစ်ဒဏ်ချ
မေ ၂၁, ၂၀၁၅ - ၁၁:၂၁ ညနေ
ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်မှ ဆရာတော်တပါး အသတ်ခံရမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကို ကရင် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ စုပေါင်း၍ အထူးခုံရုံးဖွဲ့ စစ်ဆေးပြီး အလုပ်ကြမ်းနှင့် နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ်ကြောင်း သိရသည်။
ဆော်ဒီအာရေဗျ ရဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်နေမှုကိုခေါင်းငုံ့ခံမည် မဟုတ် / အန်ဆွာရွလ္လာဟ် (ယီမင်)
မတျ ၂၉, ၂၀၁၅ - ၆:၁၀ ညနေ
ယီမင်နိုင်ငံ၏လူထုထောက်ခံ အဖွဲ့ အန်ဆွာရွလ္လာဟ်၏ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ဖြစ်သူ စိုက်ဖိုလ္လာဟ် အလ်ရှာမ်းမီ အနေဖြင့် အမေးအဖြေအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုတွင် အီဂျစ်နိုင်ငံတွင်ကျင်းပသည့် (ရှရ်မ်မိုရ်ှရှိက္ခ်) အာရပ်ခေါင်း ဆောင်များ ညီလာခံ တွင် ရာထူးမှအပြုတ်ချခံလိုက်ရသည့် သမ္မတ မန်စူရ် ဟာဒီ နဲ့ အခြား အာရပ်နိုင်ငံများ ၏ခေါင်းဆောင်တို့၏ ထုတ် ဖော်တင်ပြမှု များကို အလွန်တရာ ရှက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ထုတ်ဖော်တင်ပြမှု များဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်။
မြိုင်ကြီးငူဆရာတော်ဦးသုဇနရဲ့ လက်ထောက်ဆရာတော်လည်းဖြစ် ဆွေမျိုးတော်စပ်သူ လည်းဖြစ်တဲ့ ဆရာတော် ဦးခေမိကဟာ သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီး သံဃာ့ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှု ခံယူနေရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ တပေါင်းလပြည့်ကျော် ၆ ရက် (မတ်လ ၁၀) နေ့ညက မြိုင်ကြီးငူဒေသ မယ့်ပလိ ကျေးရွာမှာ ရဟန်းခံရှင်ပြုပွဲလုပ်နေစဉ် ပစ်ခတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး နောက်ကြောကနေ သေနတ်နဲ့ ၄ ချက် ပစ်ခတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ ဆရာတော်ဦးခေမိက ကဒီဗွီဘီကို မိန့်ပါတယ်။
မျိုးတုံးပြီဟု ယူဆထားသည့်ငှက် မြန်မာတွင် ပြန်တွေ့
မတျ ၇, ၂၀၁၅ - ၂:၂၁ ညနေ
မျိုးတုံးသွားပြီလို့ ယူဆထားတဲ့ စွေ့ (သို့) ဘာဘလာ အုပ်စုဝင် ငှက်ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့က ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ အားလုံးသေဆုံးသွားပြီလို့ မှတ်ထင်ထားတဲ့ အိမ်စာကလေးနဲ့ အရွယ်တူ အညိုရောင် ငှက်တွေကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၁၉၄၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်က နောက်ဆုံး တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့တာကို ၆ လတကြိမ်ထုတ် BirdingASIA မဂ္ဂဇင်းမှာ ဖော်ပြခဲ့တာလို့ orientalbirdclub အင်တာနက် ၀က်ဆိုဒ်မှာရေးပါတယ်။
မှတ်သား ရမည့် အဖိုးတန်စကား များ (၁)
ဖဖေျောဝါရီ ၂၇, ၂၀၁၅ - ၁၁:၃၂ နံနကျ
ကျွန်တော်များ အဗ်နာသတင်း ဌာန မိသားစုများ မှ မြန်မာစာဖတ် ချစ်ပရိတ်သတ်များ အတွက် (မှတ်သား ရမည့် အဖိုးတန်စကား များ) ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အခွင့်ကြုံလျှင် ကြုံသလို တင်ပြသွား မည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်း ကောင်း ပါးလိုက်ပါတယ်။
မွတ်စလင် ၂၀ ဦး အကြမ်းဖက် ဆက်နွှယ်မှုဖြင့် တရားရင်ဆိုင်နေရ
ဒီဇငျဘာ ၁၁, ၂၀၁၄ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ဆက်သွယ်ချက်များရှိနေသည်ဆိုသည့် စွပ်စွဲချက်ဖြင့် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်း ခံထားရသော မွတ်စလင် ၂၀ ဦးသည် စီရင်ချက်ချမည့်အချိန်ကို စောင့်ဆိုင်းရင်း ထောင်တွင်းတွင် ၅ လ နီးပါး ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ထိန်းသိမ်း ခံထားရသူတချို့အတွက် လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ပေးနေသော ရှေ့နေတဦးက တရားစီရင်မှုသည် မျှတခြင်းမရှိဘဲ လုံလောက် ခိုင်မာသည့် သက်သေအထောက်အထားမဲ့ စွပ်စွဲခြင်းသာဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
အောင်ဇေယျတုဂျာနယ်ပါ ဘာသာရေးစော်ကားမှု ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ စုပေါင်းရှုတ်ချ
နိုဝငျဘာ ၂၁, ၂၀၁၄ - ၅:၁၉ နံနကျ
အောင်ဇေယျတုဂျာနယ်ပါ ဘာသာရေးစော်ကားမှုဘာသာပေါင်းစုံလက်မခံ 2အောင်ဇေယျတုဂျာနယ်ပါ ဘာသာရေးစော်ကားမှုအရေးအသားတွေကို မြန်မာနိင်ငံမှာရှိတဲ့ ဘာသာပေါင်းစုံက ဘာသာရေး အကြီးအကဲတွေ က ရှုတ်ချကြောင်း ဘာသာကိုယ်စီ အေးချမ်းသည် ဒို့တတွေ ရှောင်ရှား အမုန်းတရားလို့ အမည်ပေးထားတဲ့ မန္တလေးမြို့ ကံတက်ကုန်း ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ နိုဝင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ သာပေါင်းစုံအခမ်းအနားမှာ ဘာသာကြီး ၄ ရပ်က ခေါင်းဆောင်အသီးသီးက မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
နိုဝငျဘာ ၆, ၂၀၁၄ - ၁:၃၇ ညနေ
တောင်ကြီးတန်ဆောင် တိုင်ပွဲတော်(၆)ရက်မြောက်ည တွင် ရာသီဥတုဆိုးရွားမှုကြောင့် မီးပုံးပျံတစ်လုံးထပ်မံပြုတ်ကျပြီး ကလေးငယ်တစ်ဦးသေဆုံးသွား ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ပွဲတော်(၆)ရက်မြောက်ည နိုဝင်ဘာ ၄ရက် ညဉ့်သန်းခေါင်ယံ တွင် ရောင်စုံလူငယ်အဖွဲ့ကလွှတ် တင်လိုက်သည့် မီးကျည်မီးပုံးပျံ သည် ပေငါးရာအမြင့်ခန့်မှပြုတ် ကျသွားခြင်းဖြစ်ပြီး ပွဲခင်းအပြင် ဘက်ဈေးဆိုင်တန်းအနီးရှိ တဲပေါ် သို့ ပြုတ်ကျရာကလေးငယ်တစ်ဦး မီးလောင်သေဆုံးသွားကြောင်း ဒေသခံများကပြောသည်။
ဤအပတ် အတွက် အစ္စလာမ်မီ ဆိုင်ရာ မှတ်သားစရာများ
ဩဂုတျ ၂၉, ၂၀၁၄ - ၂:၂၇ နံနကျ
ဤအပတ် အတွက် အစ္စလာမ်မီ ဆိုင်ရာ မှတ်သားစရာများ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် သာသနာ့ အမေးအဖြေများကို အင်ရှာအလ္လာဟ် အပတ်စဉ် ကြာသတေး(သို့)သောကြာနေ့ တွင် တင်ပြပါမည်။ စာဖတ် ပရိသတ်ကို အကျိုးပြုနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်မိပါသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ဒုတိယဝန်ကြီးများ စာရင်း
ဩဂုတျ ၂၀, ၂၀၁၄ - ၃:၄၅ ညနေ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ဒုတိယဝန်ကြီးများ စာရင်းများဖြစ်ပါသည်။